Nokia ရဲ့ Asha ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေများ တစ်ကျော့ပြန်အသက်ဝင်လာမလား?? – DigitalTimes.com.mm
160 Shares 53 Views
Nokia ရဲ့ Asha ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတွေများ တစ်ကျော့ပြန်အသက်ဝင်လာမလား??
– HMD Global ကနေ Nokia ရဲ့ Asha ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ ခွင့်ပြုချက်တင်ထားပါပြီ။
– Nokia ရဲ့ Asha ဖုန်းတွေဆိုတာကတော့ feature ဖုန်းတွေနဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကြားမှာ ကြားကျနေတယ်ဆိုရမယ့်ဖုန်းတွေပါ။
– ဒီ Asha နာမည်နဲ့ဖုန်းတွေကို ၂၀၁၄ ကတည်းက ဆက်မထုတ်တော့တာပါ။
ခလုတ်ဖုန်းတွေခေတ်စားခဲ့ချိန်ကို မီခဲ့သူတွေကတော့ Nokia ရဲ့ Asha ဆိုတဲ့နာမည်ကို ရင်းနှီးကြမှာပါ။ စမတ်ဖုန်းစစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် touchscreen နဲ့ Facebook, Twitter တွေသုံးလို့ရတဲ့ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းတစ်မျိုးပါ။ ၂၀၁၄ မှာကတည်းက ရပ်တန့်ပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့် အခုပြန်လည်အသက်ဝင်လာဖို့ လမ်းစဖြစ်နေပါပြီ။
Asha ဆိုတဲ့နာမည်ကို EU မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှာတင်ထားပြီး HMD Global က Nokia ရဲ့ Asha ဆိုတဲ့နာမည်မပျောက်ကွယ်သွားအောင် နာမည်လွှဲပြောင်းယူဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါ။ HMD အတွက်တော့ ဒီနာမည်ကိုဆက်သုံးဖြစ်တာ မသုံးဖြစ်တာ အရေးမကြီးသေးပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အရမ်းကို ဘတ်ဂျက်သင့်တဲ့ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Nokia 1 တွေကို ဈေးကွက်ကိုအရောက်ပို့ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောင်ကျရင်တော့ ဘတ်ဂျတ်ဖုန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Asha နာမည်နဲ့ Nokia ဖုန်းတွေတွေ့ဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။
Razer ဖုန်းကို လပ်တော့ပ်တစ်လုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမယ့် Project Linda